Dhismaha Waddada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo oo meel wanaagsan Maraya – Radio Muqdisho
Dhismaha Waddada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo oo meel wanaagsan Maraya
Guddoomiyaha guddiga ku howlan dhismaha waddada isku xirta magaalada Gaalkacyo iyo degmada Hobyo ee gobolka mudug Cabduqaadir Maxamed shirwac oo waraysi siiyay warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in meel wanaagsan marayso howshaas dhismaha ah.
“Waddadii Gaalkacyo iyo hobyo qaybtii koowaad inaan dhamayno ayaa maalmo gooban naga xigta kaddib waxaa qorshaha ahaa inaan ku gabagabayno meesha la yiraahdo libaax siinye waddadaasi oo ah lix iyo toban mitir balleceedu la egyahay taasi oon rabno inaan ka dhigno waddo labada dhinac Baabuurtu ay ka mari karaan “ ayuu yiri. Guddoomiyaha Guddiga Dhismahaas qaabilsan.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Guddiga ku howlan dhismaha waddaas Cabduqaadir Maxamed Shirwac ayaa sheegay in dhammaadka dhismaha waddadaan kaddib wajiga labaad ay ka billaabayaan magalooyinka Wisil iyo Hobyo oo uu sheegay inay ku tallo waddo aad u dhib badan baabuurtana ay isticmaali garin,
Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jirin hay’ado ka caawinaya dhismaha waddooyinkaas taas oo uu ku sheegay inay tahay in dadka Soomaaliyeed ay isku taageen inay dalkooda dhistaan.
Dhismaha waddadaan isku xirta Magaalada Gaalkacyo iyo Degmada hobyo oo dhirirkeedu gaarayo 260 kiiloo mitir waxaa si rasmi ah u dhagax dhigay sideedii bishii Abriil ee sannadkaan Madaxweynaha Galmudug iyo m’uuliyeen kale oo ka tirsan maamulka gobolka.
Ololaha dalkaaga dhiso oo ka socda gobolka shabeellaha dhexe